Ukuze ube ngumnikazi wezinwele ezinempilo nezinhle akulula kakhulu njengoba kubonakala ekuqaleni. Kwanele kuphela ukufunda amaqhinga ambalwa. Izinwele ezicwebezelayo nezilungisiwe kahle akunakwenzeka ngaphandle kokudla okunempilo. Ukuqeda ukudla okusheshayo nokudla okunamafutha. Yisho i-YEB kuya emifino nezithelo ezintsha, izithelo nezitshalo zemifino kanye netiye elihlaza. Qinisekisa ukugcwala umzimba ngezinto ezidingekayo - lokhu kuzokusiza amavithamini nezithako zokudla. Sebenzisa "i-cosmetology yabantu"! Ukupheka okunjalo sekukhona iminyaka eminingi futhi kudluliselwa kusuka esizukulwaneni kuya esizukulwaneni, okuqinisekisa kuphela ukusebenza kwabo. Funda izindlela zokupheka izinwele zemvelo futhi ungakhohlwa ukuzenza njalo ngesonto. Izinwele ezomile, i-burdock oil, exutshwe noju kanye ne-cognac, iyasiza. Njengokuzikhethela, ungaxuba isipuni samafutha we-castor ne-rum. Ingxube yezinduku, izimbali ze-calendula kanye ne-oak bark kuzosiza izinwele ezinamafutha. Kusukela ekulahlekelweni kwezinwele kuzosindisa ijusi le-anyanisi kanye ne-decoction yezimpande ze-burdock. Futhi ngezinwele ezimele futhi zihlukaniswe, ijusi leklabishi elisha noma ijusi le-aloe lilungile. Uma uphupha izinwele ezibomvu, isitoreji sine-decoction ye-parsley.
Thola i-massage ebhulashi enhle futhi wenze ukusikanda kwekhanda eliyishumi nanhlanu nsuku zonke. Ungakhohlwa ukuhlanganisa izinwele zakho kuze kube sekugcineni. Kodwa ukugezwa kwezinwele nsuku zonke nge-shampoo akudingekile. Kusukela kulezi zinwele kungaba namafutha futhi uzoba nezinkinga nge-dandruff.
Ngaphambi kokuba uhlole izinwele zezinwele, cabanga izikhathi eziyikhulu - ukuthi ngabe umbala omusha uzokuhlobisa ngempela yini. Ikakhulukazi kulabo abafisa ukuba ama-blondes. Khumbula ukuthi umculi wezinwele ongenayo angabangela ukulimala okungenakuqhathaniswa nezinwele zakho. Qaphela abangewona ochwepheshe! Ukubala imibala, izinwele, ukulungiswa kwezinwele nezinwele kungcono ukwethemba abaqeqeshiwe abaqinisekisiwe - amakhosi wezinhle zokuzijabulisa ezihlelekile nezokudumisa izinwele ezidumile. Ngikholelwa, kungcono ukukhokhela izinsizakalo zokugqoka izinwele ngokubiza okungaphezulu, kepha ungaphazamisi izinwele zakho.
Ungalondolozi imikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele: ama-shampoos, ama-masks, ama-balms. Khetha imikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele ezinokwethenjelwa futhi eyaziwa kakhulu. Ikhwalithi yemikhiqizo efana ne-Loreal no-Schwarzkopf isifundo sivivinywe futhi asidingi ubufakazi. Ungakwazi ngempela ukuthembela kwizimpahla zale mikhiqizo! Ungalawula izimonyo zezinwele ezisebenzayo ezitolo ze-intanethi, ngakho uzolondoloza ngesikhathi nemali. Esikhathini esitolo sezimonyo zezinwele ze-intanethi uzothola amathuluzi afanele ngezaphulelo nezincazelo eziningiliziwe, futhi ungahambisa umyalelo nganoma isiphi isikhathi esikahle kuwe.
Ukufiphaza izinwele ezinhle
Yidla ngokulwa nezinwele
I-Botox yezinwele: iyini le nqubo futhi ingenziwa ekhaya? (Izithombe ngaphambi nangemva)
Amafutha okudoba izinwele
Yini enikeza izinwele nge-scissors ashisayo
Kanjani kahle ukususa izandiso zezinwele?
Izakhiwo zokuphulukisa, ibhotela le-peanut
Inkukhu kuhhavini: izindlela zokupheka nezitsha ezilula
Charlotte nama-apula ku-multivark
Ama-birthmarks emzimbeni kanye nezingozi zabo
Coffee cocktail (Mokko)
I-Mystery of Infant Ukulala Namaphupho
Izindawo eziyisisekelo kanye nokuhlelwa kwe-massage
Umphumela onjalo awulindelekile kunoma ubani: i-autocaram ijeziswe kakhulu, ividiyo
Imithetho eyisisekelo yokuxhumana namadoda
Ukulungiselela amanzi okuqhakaziza ekhaya
I-Thrombophlebitis yeziphetho eziphansi
Yini okufanele uyenze ngemidwebo yezingane?
Ukuphumula okuwusizo emsebenzini nasemisebenzini
Ikhekhe laseJalimane ikhekhe